ALAROBIA 28 OKTOBRA 2020
FAMPIAKARANA FAKTIORAN’NY JIRAMA : Fanahiniana natao, mpiasa 50 atao famotorana
Maro ny fitarainan’ny mpanjifan’ny Jiro sy Rano Malagasy tao anatin’ny volana maromaro teto an-drenivohitra na teo amin’ny tambajotran-tserasera “ fb” izany na koa tamin’ny haino aman-jery, mikasika ny fidangan’ny faktiora tsy amin’ny ara-drariny. 24 juin 2020
Taorian’ny fitarainan’ny mpanjifa maro teto Antananarivo momba ny fiakaran’ny faktiora dia niroso tamin’ny fanadihadiana avy hatrany ny teo anivon’ny Jirama. Voaporofo tamin’izay fotoana izay tokoa ny fahadisoana teo amin’ny “index” ary ny ankamaroan’ireo hadisoana dia fanahiniana natao daholo. Hatreto, mpiasan’ny Jirama 50 isa no heverina fa voarohirohy ao anatin’izao toe-javatra izao. Naka fepetra vonjimaika mikasika ny 15 amin’ireo 50 ireo ny Jirama, ka anisan’izany ny tale miisa roa.
Efa nanao ary manohy hatrany ny ezaka amin’ny fifandraisana an-tsoratra na an-telefaonina amin’ireo mpanjifa voakasik’ireo fahadisoana ireo ny eo anivon’ny Jirama. Izany fifandraisana izany no ahazoana mandalina ny olana eo amin’ny faktiora sy manao ny fanitsiana izay tokony hatao. Mpanjifa maro no efa nantsoina sy nanatona ny Jirama ary efa nahitana vahaolana avokoa. Raha ny tatitra avy eo anivon’ity orinasa ity, hamafisina rahateo koa ny fifandraisana sy fifanakalozana amin’ireo fikambanana mpiaro ny zon’ny mpanjifa hahafahan’ny orinasa mitondra fanazavana amin’ny antsipiriany sy hijerena miaraka ny fepetra fanampiny hamahana ny olan’ireo mpanjifa niharan’ny fiakaran’ny faktiora mihoa-pampana ireo.
Marihina fa matetika ahazoana fitarainana avy amin’ny mpanjifa hatrany ny fomba fiasan’ireto farany, indrindra moa ny lafin’ny kalitao toy ny fahatapahan-drano sy jiro mateti-piavy sy maharitra ora maro izay mahatonga fahatezerana, manampy trotraka ny halatra atao amin’ny fampiakarana ny faktiora. Arahina akaiky ny tohin’ny famotorana momba ity raharaha ity.
Nahanjahanjan’ny vahoaka irery ireo parlemantera mpanohitra AMBATONDRAZAKA (136) 26 octobre 2020 Jiolahy roa ikoizana sady gadra nitsoaka maty voatifitra FANAFIHANA TAO TAOLAGNARO (88) 26 octobre 2020 “Azo atao fa atao teny ierana”, hoy ny Depiote avy any Benenitra FANANGANANA FARITRA FAHA-24 (57) 28 octobre 2020 Vehivavy iray 29 taona mpisoloky efa nahazo vola an-tapitrisany voasambotra NOSY BE (46) 28 octobre 2020 Nanaovana tsangambato i Jean Fredy sy Dede Fenerive FENOARIVO-ATSINANANA (45) 28 octobre 2020 Olona miisa 398 tsy nanao aron-tava nosaziana teto Antananarivo COVID-19 (39) 28 octobre 2020